Ngoku kufuneka uqinisekise ukuba ungumfundi okanye usebenza kwiziko le-UNiDAYS ukonwabela isaphulelo kwicandelo lezemfundo | Ndisuka mac
Asithandabuzi ukuba uninzi lwabo bakhoyo bathenga iimveliso eApple besonwabela isaphulelo secandelo lezemfundo. Kulabo abangalaziyo olu khetho lokuthenga, cacisa ukuba licandelo apho sinokugcina khona i-euro ezimbalwa kwiimveliso ze-Apple ezinje ngeMac okanye i-iPad. Isaphulelo siyahluka ngokuxhomekeke kwimodeli ekhethiweyo kunye sinokufumana isaphulelo ukuya kuthi ga 365 euro xa uthenga iMac ckwiAppleCare okanye I-euro ezingama-68 zokuthengwa kwe- IPAD.
Ukuza kuthi ga ngoku, ukubonakaliswa kwesiqinisekiso sokuba ngabazali abathengela abantwana babo baseyunivesithi, abafundisayo okanye abasebenza kwezolawulo kulo naliphi na iziko lemfundo bekungahleliwe kwaye bekungasoloko kucelwa njalo, ngoku kufuneka kuqinisekiswe ukuba siyasebenza okanye sifunda kwiziko nge-UNIDAYS.
Uninzi lwabo bakhoyo baqinisekile ukuba bakha basebenzisa isaphulelo kwixabiso lokugqibela layo nayiphi na imveliso iApple enayo kwikhathalogu yeCandelo leMfundo kwaye khange babonise nakuphi na ukuvunywa kwayo. Olu tshintsho ngoku kunye bonke abasebenzisi abafuna ukonwabela ezi zaphulelo Kufuneka babenabo iakhawunti yasimahla kwi-UNiDAYS.
U-Apple ebesoloko enikezela ngamaxabiso awodwa kwicandelo lezemfundo iminyaka emininzi kubafundi baseyunivesithi okanye angeniswe eyunivesithi, kubazali baba bafundi bathengela abantwana babo baseyunivesithi kunye nootitshala okanye abasebenzi bezolawulo kuwo onke amanqanaba abasebenza kwiiyunivesithi. Lonke ulwazi malunga namathuba okuthenga ngezi zaphulelo unokulufumana kwiwebhusayithi ka-Apple, kwicandelo Ukuthenga iYunivesithi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ngoku kuya kufuneka uqinisekise ukuba ungumfundi okanye usebenza kwiziko le-UNiDAYS ukonwabela isaphulelo kwicandelo lezemfundo
UJaime PT sitsho
Molo, ndizimisele ukuthenga iMac kungekudala. Ndinonyana oneminyaka engama-21 ubudala ogqibe okokuqala isiDanga esiPhakamileyo kwiiNkonzo zeKhompyuter kunye noLawulo lweNethiwekhi. Kwaye omnye ukusukela kwi-18 owenza ukhetho ngoku ukwenza i-Automation kunye neRobotic Engineering. Ndingenile ukuze ndibhalise kwii-UNIDAYS kwaye inyani andazi ukuba ndiyibhalisa njani imeko yam okanye ukuba ndingakwazi na kule nto bayifundayo abantwana bam ngoku. Ngaba unokucacisa enye into kum ??? Ndithumele i-imeyile kwii-UNIDAYS ukubona ukuba bazakundiphendula.
Phendula kuJaime PT
Ingxaki ikwi-Unidas kukuba ifuna iakhawunti kwiziko lemfundo, njengomfundi anditshongo
Ndinee-imeyile ezilishumi elinambini ndibanika lonke ulwazi lwam kunye nolwamaziko endisebenza kuwo ukuze babone ukuba ndingutitshala, ndizincamathisele iziqinisekiso. Ndiphendula yonke into kwii-imeyile ezininzi apho baphinda imibuzo. Ndidiniwe nyani, ndiza kuthetha noApple kwaye ndinike ingxelo yokungaziphathi kakuhle naphi na apho ikhoyo.
Molo! Ekugqibeleni ufumene? kuba kwenzeka into efanayo kum, indixelela ukuba idomain ayisebenzi kwaye ayizukundivumela ndibhalise.